I-GIS ephathekayo, konke kusuka ku-USB - Geofumadas
I-GIS ephathekayo, konke kusuka ku-USB
Septhemba, 2009 Geospatial - GIS, I-GvSIG, qgis, uDig
Kuye ezikhishwe inguqulo ephathekayo GIS 2 isicelo nje emangalisayo ukusebenzisa kusukela idrayivu bangaphandle, USB stick futhi ngisho nezinhlelo digital ezidingekile ngekwendzawo ukuphathwa ulwazi kokubili kudeskithophu webcam.
Ifayela isifaki ukala 467 MB, kodwa kuthatha okungenani 2GB khulula e-USB ukufaka, ngoba uma angakathululwa futhi egijima 1.2 GB uhamba nge esanele.
Yiziphi izinhlelo ezifaka kuzo?
Kuyamangaza lokho okwenzayo, kusukela kwimemori ye-USB izinhlelo ezilandelayo zingenziwa:
Isofthiwe ye-desktop ye-GIS
I-Quantum GIS (i-1.02)
Izinhlelo zezinsiza zewebhu:
Iseva ye-MySQ Database
Ama-FWTools: i-ogr, i-gdal, i-python, i-mapserver, i-openEV (i-2.4.2)
Futhi lezi zinsizakalo nazo ziza:
SqlSync (ipulatifomu yokuvumelanisa yolwazi)
I-GeoMetadataI-Extrector (i-extracts yamethadatha kusuka emifanekisweni ejwayelekile)
I-Shp2TImpendulo (iguqula amafayela ku-shp, enekholomu yezixhumanisi)
I-ShapeChecker (Ihlola futhi ilungisa amafayela asonakele)
Mane nje ulande isifaki, sisebenzise bese ukhetha idrayivu lapho izofakwa khona. Lokhu kudala okusebenzisekayo okuqukethe imenyu, ifolda ebizwa ngokuthi "usbgis" equkethe zonke izinhlelo, kanye nefayela le- autorun.info.
Noma kunini lapho i-USB ixhunyiwe khona, i- "setup Portable GIS" idinga ukwenziwa ukuze isistimu ibone indlela umhloli ayinikeze idiski. Ngemuva kwalokhu, kuzosebenzisa kuphela izinhlelo, inkathi. Ilungele ukusebenza ngamakhompyutha ohlobo lwe-netbook, noma ukuhamba kwimemori lapho uhamba noma ushaya phakathi kwamahhovisi ngaphandle kwekhompyutha elungisiwe.
Enye yezikhangayo ezinkulu yizinhlelo zokusebenza zeseva, ye-Apache noma i-geoserver case, okuthatha isikhathi eside kuphela ukufunda ukuyifaka okokuqala; Kulokhu kudingekile ukuthi ucindezele inkinobho ethi "qala" noma "yeka" ukuwayeka.
I-OpenLayers, iTilecache nezinhlelo ze-Featureserver zivela efayeleni le-index.html, uma iseva ye-Apache ikhuliswe (kusuka http://localhost).
Endabeni ye-QGis, ifaka i-Grass, kufanele ukhethe isiqondisi lapho usisebenzisa okokuqala (.. \_ usbgis \_ apps \_ Quantum GIS \_ grass). Lokhu kuzodingeka futhi uma uxhuma kwenye ikhompyutha futhi uhlelo lunikeza elinye igama kuyunithi.
I-PortableGIS ilayisensi ngaphansi kwe-GPL iphinde isebenze kuphela kuma-operating systems e-Windows.
Kusuka lapha ungalanda.
utshani I-GvSIG OS mapserver QGIS shp
Thumela Previous«Langaphambilini Inkinga eHonduras ... iyaqhubeka
Post Next I-Allallsoft, landa amabalazwe avela ku-Google, Yahoo, Bing kanye ne-OSMOkulandelayo »
Izimpendulo eziyi-10 ziya ku- "GIS ephathekayo, konke kusuka ku-USB"
Siyabonga kakhulu, kusebenza kahle kakhulu.
Disemba, i-2016 ku
iyiphi inguqulo eyi-gvsig efaka, ngilanda i-v5.2 ne-v5.6 version futhi ayilethi. I-qgis nje nami nginenkinga yokwenza isihlungi futhi ayingivumeli ukuba ngihlele ungqimba, yingoba iyathandeka?
UJaime Sánchez uthi:
NgoFebhuwari, i-2015 ku
Ngifake i-portableGIS, kepha i-QGIS kuphela ifakiwe, ezinye izinhlelo ze-GIS azifakiwe, omunye umuntu uyazi ukuthi kungani.
UManuel Valderrama uthi:
Ngiyayilungisa, ngiyitholile http://www.faunalia.com/usbgis
Sawubona oqoqweni, ngiphinde ngivela eChile. Umbuzo, awazi ukuthi lesi sixhumanisi siphelile kuphi?
Ukukhuleka nokubingelela kusuka eChile!
Ngakho, akukho mqondo, kufanele usebenze kahle.
Imibuzo embalwa, ukufuduka okungakanani?
Ingabe imephu esendaweni engaphezulu kweyodwa ye-UTM?
Uma uthekelisa ibalazwe lomgwaqo ukuya ku-kml ulivule nge-Google Earth, ingabe uyaphumelela?
ngiyabonga kakhulu ngokuphendula
Esikhathini geoserver e inhlangano wabeka ngefonti SRS 900913 okuyinto usebenzisa Google Maps nge imephu yami umgwaqo ubonisa kahle kodwa kunalokho usibeka Spain ibalazwe ilungelo España.Como lokho engingakwenza ukuxazulula ?.
Imuphi uhlobo okufanele ifayela kufanele liboniswe kahle emephini?
Kubonakala sengathi inkinga iwukuthi, ungqimba lwakho lomgwaqo use-UTM ne-Google Maps idinga izixhumanisi zeGiographical.
Ngiqala nge-geoserver nabavuli be-openlayers. Nginemingcele engifuna ukuya kuyo phezulu kwebalazwe le-google maps kodwa i-geoserver ayinginikezi imigqa kahle, esikhundleni semigqa ephuma njengamabala. Ku-console ye-tomcat inikeza iphutha elilandelayo:
Ukusetshenziswa okungenzeka kwe-Tranverse_Mercator »ukuqagela ngaphandle kwendawo yokusebenza.
I-latitude ingaphandle kwemingcele evunyelwe
Ukhona owaziyo ukuthi kungaba yini?
Ngizama ukufaka isendlalelo (ifayela lesandiso .shp) nge-quantum gis kwisisekelo se-postgres dtaos. Uma ufaka ifayela linikeza iphutha elilandelayo:
Izinkinga uma ufaka izinto zendawo kusuka efayeleni:
C: \_ Amadokhumenti kanye nezilungiselelo \_ umsebenzisi \_ Desktop \_ izivivinyo \_ p_file.shp
I-database inikeze iphutha ngesikhathi isebenza le SQL:
FAKA KU "esidlangalaleni». »I-File_p» AMA-VALUES (0, '110000 ′, I', '0 ′,' 471.649 ′, NULL, NULL, NULL, '0 ′,… (sika yonke i-SQL)
I-ERROR: umugqa omusha wobudlelwano «file_p» wephula ukunqunyelwa kwesheke «kokuphoqelela_dims_the_geom»
Ngabe omunye angangisiza?